သူ လှလို့ ချစ်တယ်ဆိုရင် သူ့ အလှတွေ ပျက်သွားရင်ရော မင်း ချစ်ဦးမှာလား… – Trend.com.mm
သူ လှလို့ ချစ်တယ်ဆိုရင် သူ့ အလှတွေ ပျက်သွားရင်ရော မင်း ချစ်ဦးမှာလား…
၁။ သူ့ အပြုံးကို သဘောကျလို့ ချစ်တယ်ဆိုရင်… သူ့အပြုံးတွေ ပျောက်ကွယ်သွားရင်ရော မင်း ချစ်ဦးမှာလား။
၂။ သူ့ သွားလေးတွေ ညီညာလို့ ချစ်တယ်ဆိုရင်… သူ့သွားတွေ ကျိုးကုန်ရင်ရော မင်း ချစ်ဦးမှာလား။
၃။ သူ့ ဆံနွယ်လေးတွေ ကြော့ရှင်းလို့ ချစ်တယ်ဆိုရင်…သူ ဆံပင်တွေဖြူပြီး တစ်ခေါင်းလုံး ရှင်းသွားရင်ရော မင်း ချစ်ဦးမှာလား။
၄။ သူ ပိန်လို့ချစ်တယ်ဆိုရင်… သူ ၀ လာရင်ရော မင်း ချစ်ဦးမှာလား။
၅။ သူ တောင့်တင်း ကြံ့ခိုင်လို့ ချစ်တယ် ဆိုရင်… သူ အိပ်ရာထဲ ဘုန်းဘုန်းလဲခဲ့ ရင်ရော မင်း ချစ်ဦးမှာလား။
၆။ သူ ရိုးသားလို့ချစ်တယ်ဆိုရင်…သူ လှည့်စားခဲ့ရင်ရော မင်း ချစ်ဦးမှာလား။
၇။ သူ ဉာဏ်ကောင်းလို့ ချစ်တယ်ဆိုရင်… သူ မှတ်ဉာဏ်တွေ ချို့ယွင်းသွားတဲ့အရွယ်မှာရော မင်း ချစ်ဦးမှာလား။
၈။ သူ့အသားရေ လှလို့ ချစ်တယ်ဆိုရင်….သူ ပါးရေ နားရေ တွန့်သွားရင်ရော မင်း ချစ်ဦးမှာလား။
၉။ သူ့စကားသံတွေ ချိုသာလို့ ချစ်တယ်ဆိုရင်… သူ ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက် လုပ်ရင်ရော မင်း ချစ်ဦးမှာလား။
၁၀။ သူ့ရဲ့ဥစ္စာ စည်းစိမ်ကို ချစ်တယ်ဆိုရင်…. သူ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ တစ်ခုမှ မရှိတော့ရင်ရော မင်းချစ်ဦးမှာလား။
၁၁။ သူ့ မျက်ဝန်းတွေ ညှို့အား ပြင်းလို့ ချစ်တယ်ဆိုရင်…. သူ့ မျက်လုံးကွယ်သွားရင်ရော မင်း ချစ်ဦးမှာလား။
၁၂။ သူ့ အသံလေးကို သဘောကျလို့ ချစ်တယ်ဆိုရင်… သူ့ အသံတွေ တုန်ယင်သွားရင်ရော မင်း ချစ်ဦးမှာလား။
ဒါတွေ အားလုံး မချစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဖြေထွက်လာရင်တော့…. မင်း သူ့ကို တကယ် ချစ်တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ မင်း ကိုယ် မင်း ညာနေတာပါ။ ဒီလို ဆိုရင်တော့ သူ့ကို ချစ်တယ်လို့ မပြောထိုက်ပါဘူး။ ချစ်တယ်ဆိုတာ တာဝန်တစ်ခုပဲမဟုတ်လား။
ဒီတာဝန်ကို ယူနိုင်မှ မင်း သူ့ရဲ့ နှလုံးသားကို တို့ထိပြီး ချစ်တာလို့ သူ့အနေနဲ့ ယုံကြည်နိုင်မှာလေ။
အချစ်စစ် ဆိုတာ တကယ်တော့ သူ့ရဲ့လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေအထားကို ချစ်တာမဟုတ်ပဲ သူ့ရဲ့နှလုံးသားကို တို့ထိပြီး ချစ်တာပါပဲ။
၁။ သူ့ အပွုံးကို သဘောကလြို့ ခဈြတယျဆိုရငျ… သူ့အပွုံးတှေ ပြောကျကှယျသှားရငျရော မငျး ခဈြဦးမှာလား။
၂။ သူ့ သှားလေးတှေ ညီညာလို့ ခဈြတယျဆိုရငျ… သူ့သှားတှေ ကြိုးကုနျရငျရော မငျး ခဈြဦးမှာလား။
၃။ သူ့ ဆံနှယျလေးတှေ ကွော့ရှငျးလို့ ခဈြတယျဆိုရငျ…သူ ဆံပငျတှဖွေူပွီး တဈခေါငျးလုံး ရှငျးသှားရငျရော မငျး ခဈြဦးမှာလား။
၄။ သူ ပိနျလို့ခဈြတယျဆိုရငျ… သူ ၀ လာရငျရော မငျး ခဈြဦးမှာလား။
၅။ သူ တောငျ့တငျး ကွံ့ခိုငျလို့ ခဈြတယျ ဆိုရငျ… သူ အိပျရာထဲ ဘုနျးဘုနျးလဲခဲ့ ရငျရော မငျး ခဈြဦးမှာလား။
၆။ သူ ရိုးသားလို့ခဈြတယျဆိုရငျ…သူ လှညျ့စားခဲ့ရငျရော မငျး ခဈြဦးမှာလား။
၇။ သူ ဉာဏျကောငျးလို့ ခဈြတယျဆိုရငျ… သူ မှတျဉာဏျတှေ ခြို့ယှငျးသှားတဲ့အရှယျမှာရော မငျး ခဈြဦးမှာလား။
၈။ သူ့အသားရေ လှလို့ ခဈြတယျဆိုရငျ….သူ ပါးရေ နားရေ တှနျ့သှားရငျရော မငျး ခဈြဦးမှာလား။
၉။ သူ့စကားသံတှေ ခြိုသာလို့ ခဈြတယျဆိုရငျ… သူ ဗဈြတောကျဗဈြတောကျ လုပျရငျရော မငျး ခဈြဦးမှာလား။
၁၀။ သူ့ရဲ့ဥစ်စာ စညျးစိမျကို ခဈြတယျဆိုရငျ…. သူ ပိုငျဆိုငျမှုတှေ တဈခုမှ မရှိတော့ရငျရော မငျးခဈြဦးမှာလား။
၁၁။ သူ့ မကျြဝနျးတှေ ညှို့အား ပွငျးလို့ ခဈြတယျဆိုရငျ…. သူ့ မကျြလုံးကှယျသှားရငျရော မငျး ခဈြဦးမှာလား။
၁၂။ သူ့ အသံလေးကို သဘောကလြို့ ခဈြတယျဆိုရငျ… သူ့ အသံတှေ တုနျယငျသှားရငျရော မငျး ခဈြဦးမှာလား။
ဒါတှေ အားလုံး မခဈြတော့ဘူးဆိုတဲ့အဖွထှေကျလာရငျတော့…. မငျး သူ့ကို တကယျ ခဈြတာ မဟုတျဘူးလေ။ မငျး ကိုယျ မငျး ညာနတောပါ။ ဒီလို ဆိုရငျတော့ သူ့ကို ခဈြတယျလို့ မပွောထိုကျပါဘူး။ ခဈြတယျဆိုတာ တာဝနျတဈခုပဲမဟုတျလား။
ဒီတာဝနျကို ယူနိုငျမှ မငျး သူ့ရဲ့ နှလုံးသားကို တို့ထိပွီး ခဈြတာလို့ သူ့အနနေဲ့ ယုံကွညျနိုငျမှာလေ။
အခဈြစဈ ဆိုတာ တကယျတော့ သူ့ရဲ့လကျရှိ ပိုငျဆိုငျတဲ့အနအေထားကို ခဈြတာမဟုတျပဲ သူ့ရဲ့နှလုံးသားကို တို့ထိပွီး ခဈြတာပါပဲ။